Showing ११-२० of ४५१ items.
कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठमा, १० हजार ५० कामदार लैजाने ( फारम भर्न लिङ्कसहित )
काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत सन् २०१९ का लागि प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठमा हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस कोरिया शाखाले आज एक सूचना जारी गर्दै भाषा परीक्षाका लागि आगामी चैत ८ देखि १७ गतेसम्म आवेदन दर्ता गर्न सकिने जनाएको छ । आवेदकको परीक्षा काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रबाट सञ्चालन गरिनेछ । दरखास्त दर्ता गर्दा नै परीक्षार्थीले आफूले परीक्षा दिन चाहेको केन्द्र रोज्नुपर्ने इपिएस शाखाले जनाएको छ । पोखरा केन्द्रको हकमा पहिलो आउने १२ हजार मात्रले आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् । भाषा परीक्षाका लागि इपिएस शाखाको वेबसाइट www.eoers.epsnepal.gov.n
प्रकाशित मितिः फाल्गुन २८, २०७५
८०५ पटक पढिएको
सिरहा/ जिल्ला सिरहाको विभिन्न ठाउँमा भाइटीकाका दिनदेखि नै मनाइने दिदीबहिनी र दाजुभाइबीच प्रेमको प्रतीकका रुपमा रहेको सामाचकेवा पर्व कार्तिक २३ गते देखि विधिवत रुपमा सुरु भएको छ । सामाचकेवा दिदीबहिनीद्वारा दाजुभाइको दीर्घायुको सम्पन्नताका लागि कामना गरिने पर्व हो । कात्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि अर्थात कात्तिक पूर्णिमाको मध्यरात्रिमा सम्पन्न हुने यस पर्वका लागि आजै कलात्मक मूर्ति बनाउनका लागि माटोको जोहो गर्नुपर्ने भएकाले पर्वको शुभारम्भका रुपमा लिने गरिएको हो । यो पर्वका लागि दिदीबहिनीले माटाका विभिन्न प्रकारका जनावर, चरा र मानवलगायतका मूर्ति बनाएर कात्तिक पूर्णिमाको मध्यरात्रिमा विशेष पूजाप
पथरीको छैठमा पहाडे समुदायको अगुवाई
पथरीशनिश्चरे/तराइबासी हिन्दु समुदायले मनाउँदै आएको छैठ पर्वलाई सबै जातजातीको साझा पर्व बनाउनका लागि पहाडी समुदायको अगुवाईमा मोरङको पथरीशनिश्चरेमा सद्भावनापूर्ण सहकार्यमा छैठ सम्पन्न भएको छ । त्यहाँ त पहाडे समुदायको अगुवाई र बाहुल्यतामा विगत २० वर्षदेखि छैठ पर्व मनाइने गरिएको छ । छैठ समितिका अध्यक्ष समेत पहाडे समुदायका छन् । मंगलबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई र बुधबार विहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छैठको पूजा सम्पन्न भएको छ । साँझ आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै पथरीशनिश्चरे नगरपालिका उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलाले छैठ पर्वले सामाजिक सद्भाव सिर्जना गरी सबैको मन असल र इमान्दार बनाउन मद्धत
प्रकाशित मितिः कार्तिक २८, २०७५
उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ, यस्तो रहयो विराटनगरको छठ(फाेटाेफिचर)
विराटनगर/ उदाउँदो विहानी पखको सूर्यलाई अर्घ दिइ यस वर्षको छठ पर्व आज सम्पन्न भएको छ । नदी, तलाउ, पोखरी, खोला किनारबाट अघिल्लो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका व्रतालुहरुले रातभर जाग्राम बसेर आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिए । सूर्यको उपासनासहित छठी माताको पूजा गरेमा रोगव्याध निको हुने, सन्तान प्राप्त हुने तथा परिवारमा सुख शान्ति र समृद्धि हुने धार्मिक विश्वास छ । विराटनगरको सिंघिया, केसलिया खोला र नहरहरुमा श्रद्धालुहरुको घुइँचो थियो । [caption id="attachment_100048" align="aligncenter" width="952"] तस्विरहरू : अनिल श्रेष्ठ[/caption]
छठ पर्वको तेस्रो दिन: अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ अर्पण (तस्बिरहरू)
विराटनगर/ आज छठ पर्वको तेस्रो दिन सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजा गरी हर्षोल्लासपूर्वक रुपमा छठ पर्व मनाइँदैछ । चार दिनसम्म मनाइने यस पर्वमा सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत सूर्यको उपासनाको पहिलो दिन नुहाएर चोखो भई खाने, दोस्रो दिन खर्ना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि विधिवत् रुपमा सम्पन्न हुने गर्दछ । छठ अवधिभरि माछा, मासु, लसुन, प्याज, कोदो, मसुरो, उसानाको चामललगायतका खाद्य वस्तु प्रयोग गर्न निशेष गरिएको हुन्छ । कात्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यो पर्व आइतबारदेखि शुरु भएको हो । छठको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई
प्रकाशित मितिः कार्तिक २७, २०७५
७९२ पटक पढिएको
समुन्नत महानगर निर्माणको अभियानमा घिस्रिँदै विराटनगरका मेयर
विराटनगर/ समुन्नत महानगर बनाउने परिकल्पना बोकेका विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले महानगरको समृद्धिका लागि भन्दै कठोर व्रत बसेका छन् । मंगलबार मेयर पराजुली विराटनगरका सडकमा लम्पसार परेर दण्ड प्रणाम गर्दै छठ देवीको घाटसम्म अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन पुगेका छन् । पराजुलीले मेयर भएपछि दोस्रो पटक दण्ड प्रणाम गर्दै खोलासम्म छठ देवीलाई अर्घ दिएका हुन् । पराजुलीले दण्ड प्रणाम गर्दै छठदेवीको आरधना गरेको १५ औं पटक हो । उनी दण्ड प्रणाम गर्दै करिब चार किलोमिटर घस्रिएका छन् । पराजुलीले आफ्नो घरअगाडिको पञ्चाङ्ग मन्दिरबाट मंगलबार दिउँसो साढे १२ बजे यो यात्रा शुरु गरेका थिए । उनलाई छठ पूजा स्थल सिं
कसरी गर्ने छठ पूजा ?
धरान/ छठ पूजा चार दिवसीय उत्सव हो । यसको शुरुवात कार्तिक शुक्ल चतुर्थीबाट हुन्छ । र, कार्तिक शुक्ल सप्तमीको दिन समापन हुन्छ । छठका व्रतालु निरन्तर ३६ घण्टा पानी नखाई व्रत बस्छन् । यो व्रतमा शुद्धतालाई ध्यानमा राखेर उपवास बसिन्छ । यो व्रत कठिन व्रतहरू मध्येमा पर्दछ । यो पटक छठ पर्व ११ नोभेम्बर ‘नुहाय–खाए’ बाट शुरु भएको छ । र, नोभेम्बर १४ मा समापन हुन्छ । छठ पूजा वास्तविक रुपमा प्रकृतिको पूजा हो । यो अवसरमा सूर्य भगवानको पूजा हुन्छ । सूर्यलाई देख्न सकिने एक मात्र भगवान्का रूपमा लिइन्छ । अस्ताउँदो सूर्य भगवान्को पूजा गरेर सूर्य भगवान्को उपासना गरिन्छ । व्रतालुहरूले दिनभर उज्यालो प्रदान गर्ने स
प्रकाशित मितिः कार्तिक २६, २०७५
८३४ पटक पढिएको
तिहारको मौलिकता हराउँदै
इटहरी/ तिहारमा खेलिने देउसीभैलोको मौलिकता हराउँदै गएको छ । तिहारमा खेलिने देउसीभैलोमा आजभोली र्याप र हिन्दी गीतले गर्दा मौलिकता हराउँदै गएको अग्रजहरूको गुनासो छ । देउसीको मौलिकता नष्ट हुँदा अग्रजहरू चिन्तित बन्न पुगेका छन् । क्लब, समुह, सहकारी, तथा जातीय सङ्घसंस्थाहरू मौलिकतामा भन्दा पनि पश्चिमा संस्कृतिका गीतहरूमा रमाउन थालेका छन् । गाउँघरमा झिलिमिलि, झिलिमिलि देउसी रेको आवाज गुञ्जन छोडेको भन्दै बुढापाकाहरू चिन्ता गर्ने थालेका छन् । देउसी भैलोको मौलिकता भने बर्सेनी हराउँदै गएको इटहरीको बृद्धचौतारीमा भेटिएका ८२ वर्षीय वृद्धा उद्धव भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विशेष गरी तिहारको रौनक हराएक
संस्कृति तुरुन्त बदलिँदैन, सभ्यता बदलिन्छ। मानिसहरु पहिले भोटो लगाउँथे, अहिले फूर्तिका साथ सर्ट, भेस्ट लगाउँछन्। हामी राष्ट्रियताको कुरा गछौँ तर, खानपान र लवाई सभ्यता पश्चिमा अपनाइरहेका छौँ। संस्कृतिसँग जीवनले प्राप्त गरेका अविस्मरणीय कुराहरु जोडिएका छन्। कुनै सिद्धान्त होलान्, कुनै प्रेमका कुरा होलान्, कुनै परम्पराका कुरा होलान्, कुनै नैतिकताका कुरा होलान्, कुनै सामाजिक नीति–नियमका कुरा होलान्। यी कुराहरु एउटा पर्वको रुपमा देखिन्छन्। यो एउटा संस्कृति भयो। यसलाई कसरी मनाउने भन्ने बाहिरी कुरा हो तर, यसको महत्व उही रहन्छ। त्यो भित्री कुरा हो। जुन मानवीय मूल
प्रकाशित मितिः कार्तिक २२, २०७५
तिहारको चौथो दिन आज गोरु तिहार तथा म्हः पूजा
धरान / यमपञ्चकको चौथो दिन आज गोवर्धन पूजा गरी मनाइादैछ । आजका दिन घर आागनमा गाईको गोबर र रातोमाटोले लिपपोत गरी गोर्वधन पर्वतको आकृति बनाई पूजा गर्ने गरिन्छ । किसानहरुले आज वर्षभरि जमिन जोत्न र गाडा तान्न सहयोग गर्ने गोरुलाई विभिन्न परिकार बनाई खुवाउने र पूजा गर्ने गर्दछन् । ग्रामीण भेगमा घरदेखि गोठसम्म तोरण टाङने गरिन्छ । द्वापरयुगमा भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो हातले गोर्वधनन पर्वत उचाली गोकुलवासीलाई वर्षाबाट बचाई इन्द्रको घमण्ड नष्ट गरेकाले सोहीबेलादेखि गोर्वधनन पर्वतको पूजा गर्ने चलन रहेको धार्मिक विश्वास छ । गाईको गोबरले घर तथा आागन लिपपोत गर्नाले अन्य शत्रु जीवाणुले आक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने
६४३ पटक पढिएको